Gịnị ka ido aha nsọ pụtara?
Paolo Tescione	Edere ya Ọktoba 3, 2020 Ọktoba 3, 2020
Nzoputa bu nmalite ndu nke ndi Kristian. Mgbe mmadu meghariri na nmehie nile ha ma nabata Jisos Kraist dika Onye nzoputa ha, ha abanyela ugbua ohuru na ndu nke juputara na Mo Nso.
Ọ bụkwa mmalite nke usoro a maara dị ka ịdị nsọ. Ozugbo Mmụọ Nsọ ghọrọ ikike na-eduzi onye kwere ekwe, ọ na-amalite ime ka mmadụ kwenye ma gbanwee ya. Usoro mgbanwe nke a ka amatara dị ka ido-nsọ. Site na ido-nsacha, Chineke na-eme ka mmadụ dị nsọ, na-emeghị mmehie, ma dịrịkwa njikere karịa mgbe ebighị ebi n’eluigwe.
Gini ka ido nso di?
Odido nsonaazụ bụ nsonazụ nke Mmụọ Nsọ bi na onye kwere ekwe. O puru ime mgbe onye nmehie cheghariri na nmehie ya ma nabata ihunanya na ngbaghara nke Jisos Kraist.
Nkọwa ido nsọ bụ: “ido nsọ; do iche iche dika ihe di nsọ; doo nsọ; ọcha ma ọ bụ na mmehie; inye okpukpe okpukpe nye; mee ya ka ọ bụrụ nke ziri ezi ma ọ bụ kegide; nye ikike nsọpụrụ ma ọ bụ nkwanye ugwu; ime ka ọ rụpụta ihe ma ọ bụ weta ngọzi ime mmụọ “. Na okwukwe ndi Kraist, usoro nke idi nso bu ngbanwe ime nke idi ka Jisos.
Dị ka Chineke bụ mmadụ, mere mmadụ, Jizọs Kraịst biri ndụ zuru oke, kwekọrọ kpam kpam na uche Nna. Ndị ọzọ niile, n’aka nke ọzọ, amụrụ na mmehie ma amaghị etu esi ebi ndụ zuru oke na uche Chineke.Ọbụna ndị kwere ekwe, ndị a zọpụtara site na ibi n’okpuru ikpe na ikpe nke echiche na omume mmehie na-akpata, ka na-eche ọnwụnwa ihu, ha na-emehie ihe ma na-alụso akụkụ mmehie nke ọdịdị ha ọgụ. Iji dozie onye ọbụla ịbụ onye na-adịchaghị ala na elu igwe, Mụọ Nsọ na-ebido usoro nkwenye na nduzi. Ka oge na-aga, ọ bụrụ na onye kwere ekwe dị njikere ịkpụzi ya, usoro ahụ ga-agbanwe onye ahụ site n'ime.
Agba Ọhụrụ nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ido-nsọ. Amaokwu ndị a gụnyere, mana ọ bụghị naanị:
2 Timothy 2: 21 - "Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla emee ka onwe ya dị ọcha site na ihe na-enweghị nsọpụrụ, ọ ga-abụ arịa maka ịkwanyere ugwu, dị nsọ, bara uru nye onye nwe ụlọ, dị njikere maka ezi ọrụ ọ bụla.
1 Ndị Kọrịnt 6:11 - “Ma ndị dị otu a ka ụnụ bụ. Ma a sachawo gị, edoro gị nsọ, a tọwo gị onye ezi omume n’aha Onyenwe anyị Jizọs Kraịst na Mmụọ nke Chineke anyị ”.
Ndị Rom 6: 6 - "Anyị maara na a kpọgidere Kraịst anyị ochie n'obe ka e wee mee ka ahụ mmehie anyị bụrụ ihe efu, ka anyị wee ghara ịbụkwa ohu nke mmehie."
Ndị Filipaị 1: 6 - "Eji m n'aka na nke a, na onye ahụ malitere ọrụ ọma n'ime unu, ga-emezu ya n'ụbọchị nke Jizọs Kraịst."
Ndị Hibru 12:10 - "N'ihi na ha dọrọ anyị aka nwa oge dịka o si yie ha kacha mma, mana ha na-adọ anyị aka na ntị maka ọdịmma anyị, ka anyị wee keta oke n'ịdị nsọ ya."
John 15: 1-4 - “Abụ m ezi osisi vaịn ahụ, ma Nna m bụ onye na-a winụ mmanya. Alaka ọ bụla nke anaghị amị mkpụrụ n’ime m, ọ na-ewepụ ya na ngalaba ọ bụla nke na-amị mkpụrụ, ọ na-ebelata, nke mere na ọ na-amịkwu mkpụrụ. Adịworị ọcha maka okwu m gwara gị. Nọrọ n’ime m ma m nọ gị. Ebe obu na alaka pere mpe apughi imi nkpuru, ma o buru na o nogideghi n’ime osisi vine, i nweghi ike, ma obughi na i noogide n’ime m.
Olee otu esi edo anyị nsọ?
Edisana ido edi usung emi Edisana Spirit okponode owo. Otu n’ime ihe atụ dị na Baịbụl nke bụ ihe ọkpụite na ụrọ na-ekwu. Chineke bụ ọkpụite, ọ na-eke onye ọ bụla, na-etinye ha ume, ụdị mmadụ na ihe niile mere ha pụrụ iche. Ọ na-emekwa ka ha dị ka Ya ozugbo ha họọrọ iso Jizọs.
Onye ahụ bụ ụrọ na ihe atụ a, a kpụrụ ya maka ndụ a, na nke na-esote, site n’ọchịchọ nke Chineke site na ụzọ okike, wee rụọ ọrụ site na Mmụọ Nsọ. N'ihi na O kere ihe nile, Chineke na-achọ ka ndị zuru oke dị njikere ka ha zue oke ka ọ bụrụ ihe Ọ bu n'obi, karịa ụmụ mmadụ na-emehie emehie mmadụ họọrọ ịbụ. “N’ihi na anyị bụ ọrụ Ya, nke ekere n’ime Kraịst Jizọs maka ezi ọrụ, nke Chineke kwadebere tupu oge eruo, ka anyị wee jegharị n’ime ha” (Ndị Efesọs 2:10).
Mmụọ Nsọ, otu akụkụ nke ọdịdị Chineke, bụ akụkụ nke Ya nke na-ebi n'ime onye kwere ekwe ma na-akpụzi onye ahụ. Tupu Jizọs alaghachi n’eluigwe, o kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ha ga-esi n’eluigwe nyere ha aka icheta ihe ọ kụziri, kasie ha obi, zụọkwa ha ka ha dịkwuo nsọ. “Ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, ị ga-edebe ihe m nyere n'iwu. Aga m arịọ Nna, ọ ga-enyekwa gị Enyemaka ọzọ, ịnọnyere gị ruo mgbe ebighi ebi, kwa Mmụọ nke eziokwu, nke ụwa na-enweghị ike ịnata, n'ihi na ọ hụghị ma ọ bụ mara ya. Unu matara ya, n’ihi na o no n’etiti unu ma will no n’ime unu ”(Jon 14: 15- 17).
Obu ihe di ike nye ndi nmehie idebe ihe nile enyere niwu niwu, ya mere Mo Nso neme ka ndi Kraist kwere mgbe ha mehiere ma gbaa ha ume mgbe ha mere ihe ziri ezi. Usoro nkwenye a, agbamume na mgbanwe na-eme ka onye ọ bụla dị ka onye Chineke chọrọ ka ha bụrụ, ịdị nsọ na ịdị ka Jizọs.
Gini mere odi nkpa?
Ebe ọ bụ na a zọpụtara mmadụ apụtaghị na mmadụ bara uru maka ịrụ ọrụ n'Alaeze Chineke. Somefọdụ Ndị Kraịst na-aga n'ihu na-achụso ebumnobi na ebumnuche ha, ndị ọzọ na-agba mgba maka mmehie na ọnwụnwa siri ike. Ọnwụnwa ndị a anaghị eme ka a zọpụta ha, ma ọ pụtara na a ka nwere ọrụ a ga-arụ, ya mere enwere ike iji ha maka nzube Chineke, karịa nke ha.
Pọl gbara onye na-eso ụzọ ya bụ́ Timoti ume ka ọ nọgide na-achụso ezi omume ka o wee baara Onyenwe anyị uru: “Ugbu a ọ bụghị nanị arịa ọlaedo na nke ọlaọcha ka e nwere n’ụlọ buru ibu, kamakwa nke osisi na nke ụrọ, ụfọdụ dịịrị nsọpụrụ, ndị ọzọ nlelị. Ya mere, ọ bụrụ na onye ọ bụla emee onwe ya ka ọ dị ọcha site n’ihe na-adịghị nsọpụrụ, ọ ga-abụ arịa maka nsọpụrụ, dị ka ihe dị nsọ, nke bara uru nye onye nwe ụlọ, dị njikere maka ezi ọrụ ọ bụla ”(2 Timoti 2: 20-21). Bụ akụkụ nke ezi-na-ụlọ Chineke pụtara ịrụ ọrụ maka ọdịmma ya na maka otuto nke Chineke, mana na -enweghị ido-nsọ na mmeghari ohuru ọ nweghị onye ga-adị ire dịka ha nwere ike.
Ursgbaso ido nsọ bụ otu ụzọ e si achụ nsọ. Ọ bụ ezie na ọnọdụ okike Chineke zuru oke, ọ bụghị ihe okike ma ọ bụ dị nfe maka ndị mmehie, ọbụnadị ndị mmehie ejiri amara zọpụta ha, ịdị nsọ. N’ezie, ihe kpatara na ndị mmadụ enweghị ike iguzo n’ihu Chineke, ịhụ Chukwu, ma ọ bụ gaa n’eluigwe bụ na ọdịdị mmadụ bụ nmehie karịa ịdị nsọ. N’Ọpụpụ, Moses chọrọ ịhụ Chineke, ya mere Chineke mere ka ọ hụ azụ ya; naanị ntakịrị ntakịrị ọhụụ gbanwere Mozis. Baịbụl kwuru, sị: “Mgbe Mozis si n’Ugwu Saịnaị gbadata, o bukwa mbadamba nkume abụọ nke iwu ọgbụgba ndụ ahụ n’aka ya, ọ maghị na ihu ya na-enwu gbaa n’ihi na ya na Onyenwe anyị gwara okwu. Mgbe Erọn na ụmụ Izrel nile hụrụ Mozis, ihu ya na-achake achake, ha wee tụọ egwu ịbịaru ya nso ”(Ọpụpụ 34: 29-30). N’oge ndụ ya niile, Mozis kpuchiri ihu ya, wepụ ya naanị mgbe ọ nọ n’ihu Jehova.
Anyi emechaala ido nsọ?
Chineke choro ka azoputa mmadu nile ma we di ka Ya onwe ya ka ha we guzo n 'onu Ya, karia ihu uzo nke azu ya. Nke a bụ otu n'ime ihe mere o ji zitere Mmụọ Nsọ: "Ma dị ka onye kpọrọ gị dị nsọ, ka unu bụrụkwa ndị dị nsọ n'omume unu niile, n'ihi na e dere, sị:" Dị nsọ, n'ihi na adị m nsọ ”(1) Pita 1: 15-16). Site n’inwe odido nso, ndi otu Kraist we di nkwadebe kari ibi ndu ebighi ebi n’ime ido nso n’ebe Chineke no.
N’agbanyeghi na echiche nke ichoputa na imeghari ya mgbe nile puru iyi ihe nadigh nma, Baibul na-mesikwa ndi huru Onye nwe anyi n’anya obi na usoro ido ihe nso ga-akwusi. N’eluigwe, “ma ọ dịghị ihe na-adịghị ọcha ga-abata n’ime ya, ma ọ bụ onye ọ bụla nke na-eme ihe arụ ma ọ bụ ụgha, kama ọ bụ naanị ndị ahụ edere aha ha n'akwụkwọ nke ndụ Nwa Atụrụ ahụ” (Mkpughe 21:27). Mụ amaala nke eluigwe ọhụrụ na ụwa ọhụrụ agaghị emehie ọzọ. Agbanyeghị, rue ụbọchị ahụ onye kwere ekwe hụrụ Jizọs, ma ọ gafere na ndụ ọzọ ma ọ bụ laghachi, ha ga-achọ Mmụọ Nsọ iji doo ha nsọ oge niile.
Akwụkwọ Ndị Filipaị nwere ọtụtụ ihe ikwu banyere ido nsọ, Pọl gbara ndị kwere ekwe ume, sị: “Ya mere, ndị m hụrụ n'anya, dị ka unu na-erube isi mgbe niile, ya mere ugbu a, ọ bụghị naanị dị ka ọnụnọ m, kama karịa mgbe m na-anọghị, kpezienụ nzọpụta nke onwe gị n’egwu na ịma jijiji, n’ihi na ọ bụ Chineke na-arụ ọrụ n’ime gị, ma ọ bụ n’ọchịchọ ma ọ bụ ịrụ ọrụ maka obi ụtọ Ya ”(Ndị Filipaị 2: 12-13).
Ọ bụ ezie na ọnwụnwa nke ndụ a nwere ike ịbụ akụkụ nke usoro ịmecha ọcha, n’ikpeazụ ndị Kraịst ga-enwe ike iguzo n’ihu Onye Nzọpụta ha, na-a rejoiceụrị ọ foreverụ rue mgbe ebighi ebi n’ihu Ya ma bụrụ akụkụ nke Alaeze Ya ruo mgbe ebighị ebi.
Kedụ ka anyị nwere ike ịchụso ido nsọ na ndụ anyị na-adị kwa ụbọchị?
Nakwere na ịnakwere usoro ido nsọ bụ nzọụkwụ mbụ n'ịhụ mgbanwe na ndụ kwa ụbọchị. Enwere ike ịzọpụta ma isi ike, na-arapara na mmehie ma ọ bụ na-etinyebiga oke n'ihe nke ụwa isi ma na-egbochi Mmụọ Nsọ ịrụ ọrụ ahụ. Inwe obi edobe onwe ya di nkpa ma cheta na o bu ikike Chineke dika Onye Okike na Onye Nzoputa imezi ihe okike Ya. “Ma ugbua, O Onye-nwe, ị bụ Nna anyị; anyị bụ ụrọ, ị bụkwa ọkpụite anyị; anyị niile bụ ọrụ aka gị ”(Aịzaya 64: 8). A na-akpụzi ụrọ, na-eme onwe ya n'okpuru nduzi nke onye na-ese ihe. Ndi kwenyere na ya aghagh inwe otu agwa ahu.
Ekpere bụkwa akụkụ dị mkpa nke ido nsọ. Ọ bụrụ na Mmụọ Nsọ mere mmadụ mmehie, ikpegara Chineke ekpere ka o nyere aka merie ya bụ ihe mbụ kachasị mma. Fọdụ mmadụ na-ahụ mkpụrụ osisi nke Mmụọ Nsọ na Ndị Kraịst ndị ọzọ chọrọ ịmatakwu. Nke a bụ ihe iwetara Chineke n’ekpere na ịrịọsi arịrịọ ike.
Ibi n'ime ndụ a jupụtara na mgba, ihe mgbu na mgbanwe. Nzọụkwụ ọ bụla nke na-eme ka ndị mmadụ bịarukwuo Chineke nso bụ ido nsọ, ịkwadebe ndị kwere ekwe maka mgbe ebighi ebi n'ebube. Chineke zuru oke, kwesiri ntukwasi obi, ma were Mmụọ Ya mee ka ihe Okike ya bụrụ nzube ebighi ebi ahụ. Odudons] b] otù ng] zi d greatest ukwu nye Onye nke Kraist.
Nke gara aga Post Gara aga post:Dossier na Vatican: Kadịnal Becciu ezigarala Australia ego na nzuzo
Next Post → Post ozo:Ndị mmụọ ozi dị nsọ: ndị nche nke mkpụrụ obi anyị